IWishpond: Ukwenza amaza kwiNzululwazi yokuKhokelela kunye nokuZenzekelayo | Martech Zone
I-Wishpond: Ukwenza ii-Waves kwi-Lead Generation kunye ne-automation
NgoLwesithathu, uDisemba 16, 2015 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 9, 2022 Douglas Karr
Kukho isaqhwithi kolundi kushishino lokuzenzekelayo. Izithintelo ekungeneni kwamaqonga amatsha ziba ezantsi nezisezantsi, amaqonga aqolileyo aginywa ngamaqonga okuthengisa amashishini, kwaye lawo aseleyo embindini akulwandle oluthile. Nokuba bayathandaza banokuxhomekeka kubathengi babo ukuze babonakale benomtsalane kumthengi, okanye kufuneka behlise amaxabiso abo - kakhulu.
Isiphazamisi esinye kwishishini esithandayo Isihlomelo. Ngoba? Ewe, ungavula njani ukuba isimahla ukuba isetyenziselwe amashishini amancinci anabafowunelwa abangaphantsi kwama-200 kwiziko ledatha labo. Kwaye simahla, asithethi ukusebenza ngokulinganiselweyo- iza nezixhobo zokungenisa, ukuthengisa nge-imeyile, amaphepha okufika, ukuthengisa ngokuzenzekelayo, ukuvela kwewebhusayithi, iifom, kunye nolawulo olukhokelayo.
Iinkokeli zigcinwa kwaye zonke iindlela zokuziphatha zilandelwa.
Kwaye iintshukumo zichazwa ngokulula kunxibelelwano olusengqiqweni lomsebenzisi:
Ke ngokusisiseko- ngaphantsi kweendleko zeplatifomu enkulu ye-imeyile, unokufikelela kwinkqubo yokuthengisa epheleleyo. Nazi ezinye zezixhobo eziphambili ezikhoyo:
Imihla yokuLungisa -Yakha, shicilela kunye no-A / B kuvavanyo oluhamba-hamba kumaphepha okuHamba ngemizuzu ngemizuzu.
Indawo ezivelelayo yeWebhusayithi Guqula ezinye iindwendwe zewebhusayithi zikhokele iifom zokungena kwiwebhusayithi.
iifomu -Embela iiFomu zokuKhokelela kuKhokelo kwiwebhusayithi yakho kunye nebhlog.
Ukhuphiswano noKwazisa -Bamba i-Facebook Sweepstakes, Ukhuphiswano lweefoto, Ukhuphiswano lwe-Instagram Hashtag kunye nokunye.
YokuThengisa -Qhuba ii-imeyile ezizezakho kwiiNkokeli zakho ngokusekwe kwimisebenzi yabo kunye neenkcukacha zabo.
email Marketing -Zenzele ii-imeyile zakho kwiNkokeli nganye ngokusekwe kuwo nawuphi na umsebenzi okanye iinkcukacha zobuqu.
Ulawulo lweeNkokeli -Yila uLuhlu ngokusekwe kwimisebenzi yeNkokeli kwindawo yakho nakwimikhankaso.
Khokelela amanqaku -Bhala amanqaku ekhokelela ngokusekwe kwimisebenzi yabo kunye neenkcukacha zabo ukuze ubone ukuba yeyiphi ekulungeleyo ukuthenga.
Iinkokeli eziPhambili -Fumana ukuqonda kwiiNkokeli zakho. Jonga imisebenzi yabo yewebhusayithi, ii-imeyile abazivulileyo kunye nokunye.
Ukuba ungummeli, Isihlomelo ikwanayo nenkqubo yearhente.
Singasathethi ke, baye bavelisa indibaniselwano kunye neSalesforce, Infusionsoft, Insightly, Batchbook, Highrise, Pipedrive, Contactually, Base CRM, SalesforceIQ, OnePage CRM, Close.io, kunye neClio. Ukudityaniswa kwentengiso ye-imeyile kubandakanya iMailchimp, iAWeber, iGetResponse, Qha ga mshelwano, iBenchmark, iPhulo lokuJonga, iMpendulo eNgqo, i-Eventbrite, Mad Mimi, ActiveCampaign, kunye noEmma. Kananjalo banoncedo lwedesika yokunxibelelana ne-Uservoice, ukudityaniswa kophando kunye neSurveyMonkey, kunye nokudityaniswa kwenkqubo yewebhu kunye neClickWebinar, kunye neGoToWebinar. Ungathethi ngokudityaniswa kweSlack.
Kwaye iWishpond isandula ukubhengeza ukudityaniswa kwayo kweTwilio kwifowuni kunye neSMS.
Ukuba ungumsebenzisi weWordPress, baneeplagi zokuLungisa amaPhepha, iiPopu zeWebhusayithi, iiFomu zeWebhusayithi, kunye nokhuphiswano lweNtlalo!
Bhalisela iakhawunti yeWishpond SIMAHLA
Ukubhengezwa: Singumlingani onxulumene neWishpond kwaye sisebenzisa ikhonkco lethu lokudibana kuyo yonke le post.
tags: ActiveCampaignAWeberIsiseko seCRMIncwadiNiseloI-Monitor MonitorCofa kwiWebinarclioVala.ioQha ga mshelwanozonxibelelanaEmmaisiganekoGetResponseimvubdiUnyukela phezuluInfusionsoftNgqiqomaphephaNdinguMimimailchimpI-OnePage CRMUmbhobhoukuthengisaIintengisoIQMusaUkhuphiswano loLuntuSurveyMonkeyTwilioUmsebenzisiVoiceukuphendula ngokuthe nkqoIifom zeWebhusayithiIndawo ezivelelayo yeWebhusayithinqwenela
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2015 ngo-11: 11 AM
Ndiyavuya kuba kulula kakhulu ukudibanisa wishpond kunye GetResponse 🙂
NgoJanuwari 4, 2016 ngo-6:50 PM
Inqaku elihle, enkosi Douglas! Zithini izimvo zakho malunga nomakhi wephepha le-Wishpond's Landing Page? Ngaba kulula ukuyisebenzisa?
Jan 7, 2016 kwi-1: 15 AM
Ukukhethwa kweetemplates zephepha lokufika kuhle. Ukwenza ngokwezifiso kunokufuna umsebenzi othile, nangona kunjalo!
Feb 3, 2016 ngo-6: 36 PM
Iyamangalisa! Enkosi ngokwabelana ngeli nqaku Douglass!